Isbarbardhiga qiimaha ESRI-Mapinfo-Cadcorp - Gofumed
Disember, 2007 ArcGIS-ESRI, Cadcorp, Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah
Markii hore waxaanu ku qiimeynay kharashyada ruqsadaha ah ee ugu yaraan qiyaasta GIS-yada, ugu yaraan kuwa taageera sQLServer 2008.
Tani waa falanqayn uu sameeyay Petz, maalin maalmaha ka mid ah oo ay ahayd inuu qaato go'aan uu ku hirgaliyo adeeg khariidad (IMS). Tan awgeed wuxuu isbarbar dhig ku sameeyay goortii ay adkayd in la dhexgalo laba hawlwadeen oo heer miis ah, si loogu diyaariyo sawir-qaadista iyo adeegga ims.
Qiimaha waxaa ku jira Pounds Sterling, maadaama Patrick laga soo xigtay wakhtigaa, si kastaba ha ahaatee, inkastoo dakhliga uu hoos u dhacay xiriirka ayaa weli ah.
2 Liisaska Universal 2 £ 280 £ 560
2 Liisaska ArcGIS 9 2 £ 1,450 £ 2,900
2 Mapinfo Ruqsadaha Hawlaha 2 £ 1,095 £ 2,190
2 Liisaska CadCorp Map Editor 2 £ 2,200 £ 4,400
CadCorp IMS (Qofka 1?) 1 8,500 £ 8,500
Shabakada dhexgalka Macmiilka ah 1 £ 1,000 £ 1,000
Way fiicantahay in ay ka jaban tahay ESRI, maxaa yeelay taasi waxay ka caawisaa sii waarida garoon loo yaqaan, waana mid la jabin karo si loo arko in kala cayncayn ah, qalab ah marar badan waxaan ka fekernay, waxaa loo arkaa dadka isticmaala khibrad u leh; Tani waxay faa'iido u tahay tartanka qiimaha shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ... waxay u muuqataa in la arko haddii ay sii socoto.
Post Previous«Previous AutoCAD iyo sanadaha 25
Post Next Ku beddel faylka dwg la'aan iyada oo aan lahayn AutoCADNext »
4 Jawaab "ESRI-Mapinfo-Cadcorp"
sida aan ula shaqeynayo 9.2 ee aagga cadastarka dhow iyo waxoogaa dhibaatooyin ah oo la xidhiidha xogahayga ayaa ii sheegay in aan la shaqeyn karo sql database laakiin ma garanayo sida aad u shaqeyso haddii aad i siin karto warar ku saabsan kuwan database
iyo taageerada ...
anecdote awoowe awoowe:
Bil ka hor ama ka hor waxaan ogaanay inaanu ku dhicin UMN Khariidaddaha, way adagtahay inaanu aaminsanno, sababtoo ah waa runtii aad u walaacsan iyo in la arko bugta barnaamijkan deggan. Xaqiiqdu waxay tahay in ay ahayd mid dufan ah (waxaanu haysanay macmiil sugitaanka xalka) waxaanan ka faalloonay liistada liiska khariidadaha.
Automagically, a tigidh ee nidaamka maareynta mashruuca iyo XANNAANADA MAALINTA bugta ayaa lagu xalliyay kantaroolka version ee mashruuca. Waxaa nalaga tagay si aan u soo dejinno koodhka wabiga ah ee saxda ah, isku dar oo guud ahaan maalmaha qaarkood 3 ama 4 ahaa macmiilka oo aan qalad lahayn.
Taasi waa taageero: tayada, isla markiiba, aan sheegno bilaash (ma ahan mid xaqiiq ah, waqti walba qof walba qiimaha ayuu leeyahay, sida wanaagsan ee loo kala qaybiyo) iyo ugu dambeyntii wax ku ool ah.
Maxaad kaloo rabi laheyd?
Waxaan ku siinayaa sababta qiimaha, wadarta guud ee fulin doonta IMS waxaa loo maleynayaa in uu leeyahay waayo-aragnimo horumarineed oo raadinaya beddelaad lacag la'aan ah ... kahor inta taageerada lagu dhaleeceeyay
laakiin ESRI waxay kuu jawaabeysaa bilaash ah? ... Sidoo kale damaanad-qaadku wuxuu ku jiraa beelaha kuwaas oo ah kuwa ka jawaaba marka aad dhib kala kulanto.
Marka la barbardhigo qoraaga asalka ah (Patrick) ma ahayn Geomedia, waxaa laga yaabaa inaan dib u eegno waqti kale
Ma doonayo inaan macaamiisha la socdo GIS (Waxaan lumay: P), laakiin dabcan maanta ayaa lacag ku qarinaya macaamiisha khariidada ah ee aad leedahay WAXYAABAHA, waa badan, sababtoo ah tirada iyo kala duwanaanta xalalka xorta ah runta waa oo kharashka ku baxaya ArcIMS, MapXtreme ama wax kasta oo aan u maleynayo waa qashin dhab ah.
By habka, waxaan la yaabay in alaabta Intergraph ma muuqdaan in isbarbardhigga this ...